PUBG Mobile ho an'ny PC - Sintomy amin'ny Windows 10 & Mac (Emulator) - Ahoana No
Mikasa ny hilalao finday PUBG eo amin'ny pc-nao ve ianao - Windows na Mac?Raha eny dia tonga amin'ny toerana mety ianao. Toy ny tamin'ity lahatsoratra ity, dia nitanisa torolàlana isan-karazany izahay mba hilalaovana PUBG Mobile for PC. Ka andao hiroboka.
PUBG mobile dia lalao mety ho henonao farafahakeliny indray mandeha tao anatin'ny roa taona. Nanjary resabe tao an-tanàna hatramin'ny namoahan'ny Tencent azy tamin'ny taona 2018. Ny lalao novokarin'ny orinasa sinoa iray antsoina hoe Tencent lalao dia nanafika an'izao tontolo izao taorian'ny nahavitany fampidinana 100 tapitrisa tao anatin'ny enim-bolana.
Ankehitriny rehefa manana hevitra sarotra momba ny finday PUBG ianao dia andao hiroboka amin'ny antsipirian'ny lalao.
Famerenana Mobile PUBG:
Ny ady roa taona lasa mpanjaka toy ny karazana dia nahasarika ny gamer rehetra. Amin'izao fotoana izao, orinasa goavambe toa an'i Activision sy Ubisoft no manandrana mandray an'io karazana vaovao io, saingy i Tencent no nanao izany taloha ary nametraka ny fototra. Ny fampifangaroana mekanika basy sy ny sarintany goavambe tonga lafatra dia havaozina isaky ny vanim-potoana, bebe kokoa amin'izany. Ny firesahana momba ny sary dia manana sary azo tanterahina indrindra izay atolotry ny lalao finday iray; mazava ho azy, tsy misy vintana raha ampitahaintsika amin'ny lohateny AAA maoderina. Raha ampitahaina amin'ny lalao mandroso hafa dia manorotoro ny fifaninanana rehetra misy izy io. Tsy misy ny tantara an-tsary toy izany dia afaka mitsofoka sy milalao ianao amin'ny fotoana tsy tokony hatahorana hoe aiza no hitondran'ny tantara anao.
Dingana tokony hapetraka amin'ny finday PUBG amin'ny PC (Ho an'ny Mac):
Tsidiho nytranokala ofisialin'ny BlueStacksna misintona BlueStacks amin'ny Mac amin'ny fipihana Eto . BlueStacks dia programa iray ahafahanao misandoka ho fitaovana Android amin'ny solo-sainao Mac ary mamela anao hampiasa ny fampiharana android rehetra tsy misy fetra.
Ampidiro ny BlueStacks, ary ataovy ny fizotran'ny fisoratana anarana mahazatra toy ny hataonao amin'ny telefaona Android.
Mandehana any amin'ny Play Store ary tadiavo ny finday PUBG ary apetraho.
Vantany vao vita ny fametrahana dia ataovy izay hamehezana ny famatarana manan-danja arakaraka ny fifehezana ny lalao.
Dingana tokony hapetraka amin'ny finday PUBG amin'ny PC (Ho an'ny Windows):
Voalohany Mila misintona an Android Emulator eo am-baravarankely.
Raha vantany vao alaina sy apetraka amin'ny pc Windows ianao dia azonao atao ny manomboka misintona PUBG mety amin'ny pc Windows anao. Raha ny marina dia hahita lalao isan-karazany hapetraka ianao, na izany aza mila misafidy ny PUBG Mobile amin'ny lisitra ianao ary manomboka ny fizotry ny fisintomana.
Vantany vao alaina ny PUBG dia hapetraka ho azy izy, miandrasa fotoana kely, mandra-pahavitan'ny fametrahana azy. Raha vantany vao apetraka dia azonao atao ny manitsy ny famatarana lakile arak'izay ilainao ary mandefa ny lalao.
Inona ny atao hoe PUBG?
Pubg mobile dia ny kinova Android / iOS an'ny lalao Player Unknown Battlegrounds malaza ho an'ny PC / consoles. Maimaimpoana ny milalao. Misy ihany koa ny kinova lite ho an'ny finday / PC ho an'ny mpampiasa tsy manana fitaovana avo lenta. Mety manontany tena ianao hoe maninona no milalao finday PUBG amin'ny emulator fa tsy misintona mivantana amin'ny PC. Voalohany, maimaim-poana ny finday PUBG, izay $ 29.99 ny kinovan'ny PUBG ho an'ny PC / consoles. Ny fotoana fiandrasanao ao amin'ny lobby dia hihena satria mpilalao maro no milalao ny lalao satria maimaim-poana izany. Tonga amin'ilay hevi-dalao, mpilalao ady an-tsehatra 100 izy ity raha mpilalao 100 no mifampiady mba hahazoana ny laharana # 1 ho lasa sisa velona. Ho eny amin'ny fiaramanidina ianao, ary avy eo miaraka amin'ny fanampian'ny parachute, hipetraka amin'ny toerana samihafa ianao araka ny paikadinao.
Misy faribolana lehibe manidy anao. Rehefa tsy ao anaty faribolana ianao dia hanomboka tsy salama. Azonao atao ny mamolavola paikady toy ny mitoby, mihazakazaka, mandroba. Ny fitobiana dia rehefa manapa-kevitra ny hijanona amin'ny toerana iray ianao sy ny ekipanao ary miandry ny mpilalao hafa manatona anao. Tokony hitandrina tsara ianao ary handre ny dian'ireo fahavalo. Ny mifanohitra dia mifanohitra tanteraka amin'ny lasy. Hihazakazaka mankany amin'ny fahavalo ianao sy ny mpiara-miasa aminao alohan'ny hahitany anao ary hamono azy ireo eo noho eo.
Fomba maodely samihafa amin'ny PUBG Mobile:
Betsaka ny maody amin'ny finday PUBG. Andao isika handeha hamaky azy ireo tsirairay.
Eto, irery ianao, tafahitsoka amina nosy iray misy olona 99 vonona hamono anao amin'ny fotoana voatondro. Azonao atao ny manamboatra paikady amin'ny alàlan'ny fitadiavana ny toerana tsara indrindra miaraka amin'ny dobo fandroana avo indrindra, saingy misy ny filaharana iray amin'izany. Hisy mpilalao hafa hahafantatra izany koa, ka mila miantsona amin'ny toerana mangina ianao ary mandroba betsaka araka izay tratra nefa tsy ho voan'ny sasany.
Solosy no fomba tsara indrindra hanamafisana ny fahaizanao, ary rehefa milalao miaraka amin'ny namanao ianao dia ho afaka hampiseho ny fahaizan'ny mpilalao anao.
Ity dia dikan-teny solosa mahafinaritra kokoa amin'ny anarana mety ho noheverinao ho marina. Tsy miova ny toe-draharaha, fa ekipa 25 no manenjika anao, saingy tsy irery ianao. Ianao sy ny namanao dia afaka miara-miasa ary manohitra azy ireo, mandrindra ny loot pool, ary ny toerana manafika araka ny fanirianao.
Na mitoby na maika ny safidinao, ampiasao ny fiara hitodinana avy amin'ny toerana misy biby mpiremby maro no mangetaheta ny ranao.
3. Solosa / ekipan'ny olona voalohany
Safidy io fa tsy mode; misy bokotra eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny efijery rehefa alefa, afaka mitsambikina ianao avy eo amin'ilay olona voalohany mankany amin'ny zoro fijerin'ny olona fahatelo; mpilalao marobe no aleony ny maody olona voalohany satria miroboka kokoa izy io ary mampiseho ny tena tanjon'ny lalao.
Tsy manam-potoana ampy? Raiso ho safidy ny ady. Izy io dia toy ny lalao maty amin'ny sarintany kely misy traikefa feno, hamita ny lalao mialoha be ianao, ary tsy mila miahiahy momba ny ho faty ianao satria hovelomin'ny lalao isaky ny maty ianao. Ka noho ny filalaovana sy fanatsarana ny fahaizanao fotsiny dia ity no lalao mety indrindra.
5. Lalao mety maty
Ity no fomba tsara indrindra hampiofanana ny fitaovam-piadiana; na dia amin'ity maody ity aza dia tsy mila miahiahy momba ny fiainanao ianao. Tsy voafetra izany. Dimy v dimy, hiady amin'ireo mpilalao ekipa mena na manga ianao arakaraka ny ekipa azonao. Hamafiso ny fahaizanao mitifitra amin'ity maody ity ary isao ireo headshots ireo amin'ny lalao tena izy.
Tena mitovy amin'ny lalao maty natolotry ny mpifaninana hafa, ka maro aminareo no hahafantatra ny foto-kevitra.
Inona ny Royal Pass ao amin'ny PUBG?
Ny pass Royal dia rehefa omena valisoa ianao amin'ny filalaovana. Izy io dia misy ambaratonga 100 izay hahazoanao hoditra arakaraka ny ambaratonga misy anao. Mila mameno hatramin'ny ambaratonga 100 ianao hahazoana ny angona rehetra. Fa alao antoka fa hahatratra ny haavo 100 amin'ny faran'ny vanim-potoana; maharitra iray ka hatramin'ny roa volana ny vanim-potoana iray.
Amin'ity fizarana ity dia ho fantatrao ny karazana fitaovam-piadiana isan-karazany atolotry ny finday PUBG ary tokony hahay ianao (ity lisitra ity dia misy basy tsara indrindra ampiasaina):
akm:araky ny fantantsika rehetra, AKM no tsara indrindra amin'ny lalao rehetra; manana fahaizana 30 fihodinana izy, ary ny basy dia mahazaka ammo 7,62 mm. Raha mifehy ny lamina famafazana ianao ary manome isa ny lohan-doha, dia hovonoinao haingana ny fahavalo.
Holatra-L:Tsy mandaitra toa an'i AKM izy io fa mbola mahazo tifitra amin'ny vatana ihany. Na ity basy ity aza dia afaka mandeha mandritra ny 30 fihodinana ary mitazona ammoam-borona 5.56 mm. Satria kely kokoa ny haben'ny bala, dia hihena ny fahasimbana.
M416:Tsy mila mifehy ny lamina famafazana ianao toy ny mandrora bala amin'ny tsipika mahitsy ny basy. Mandeha amina fihodinana 30 ity basy ity ary 5,56mm ny fahaizany. Ny tifitra amin'ny vatana, ary koa ny headshots, dia miasa tsara indrindra rehefa manatona ny fahavalo.
Beryl M762:Ity no basy tsara indrindra ho hitanao ao amin'ny loot pool; manana fahaiza-manao boribory 30 sy fivarotana amin'ny bala 7.62mm izy, saingy misy zavatra iray izay sarotra amin'ny tompony ny maodely, mila fanazaran-tena be dia be ianao amin'ny ady sy ny fomba famonoana mahafaty hahafehy ity basy ity, fa rehefa voafehy ianao dia ho afaka mampiasa ny tena hery ary mampiasa azy ho tombontsoanao.
AWM:Tia mamily ny fahavalo lavitra? Eny, mety mieritreritra ianao hoe inona ilay sniping? Rehefa lavitra ny fahavalo ianao ary te hamono ny kendrena dia mampiasa basy sniper ianao. Miaraka amin'ny fanampian'ny ammo 9mm sy ny fihodinana folo dia hahazo vintana folo hamonoana ny fahavalonao ianao fa tsy ho an'ny rehetra ny fitifirana mitandrina. Tsy maintsy hampihatra azy be ianao hahafehy azy.
M24:Ity dia mety ho safidy faharoa tsara indrindra amin'ny sniping satria ny haben'ny bala dia kely kokoa noho ny AWM, ary ny marina dia somary ambany kokoa, saingy tsy mila miahiahy momba ny fifehezana ny lamina famafazana anao ianao.
SMGs (Basy ambanin'ny tany):
Ny Micro UZI dia somary kely ary mandeha amina boriboritany 25 miaraka ammoana 45 ACP. Tsy mila mifehy ny tsifotrao; manomboka mihazakazaka mankany amin'ny fahavalo amin'ny fanapoahana basy. Hahafaty olona iray ianao.
UMP45:Ity basy ity dia mitovy amin'ny UZI fa tsy dia mandaitra akory eo aloha; ity basy ity taloha dia manintona, fa ankehitriny, rehefa nerfed azy ny orinasa dia ankahalaina eo amin'ireo mpilalao matihanina.
Zavatra hafa mila karakarainao:
Fanasitranana entana:Kit-med, kitapo fanampiana, fisotroana angovo, takelaka.
Fiarovana amin'ny fahavoazana:Helmets, Vest.
Gun-enhancements:Sehatra, magazine fanampiny.
Endri-javatra fanampiny:Basy mirehitra, grenady.
Miaraka amin'ny PUBG, mahazo sari-tany midadasika ianao; afaka mihodina sy mitoby ianao.
Noho ny lazany, PUBG dia manana mpiorina be dia be izay mahatonga ny lalao hifaninana sy hampientam-po tokoa.
Miaraka amin'ny PUBG, mahazo karazana filalaovana samihafa azonao lalaovina arakaraka ny toe-tsainao ianao.
Tencent koa dia namorona emulator izay hanampy anao hilalao PUBG amin'ny PC mora foana.
Mety handevozin'ny lalao ianao raha tsy mahafehy tena.
Manantena aho fa nahazo fahitana vitsivitsy momba ny lalao ianao taorian'ny namakianao ity lahatsoratra ity. Tokony hanandrana sy hiaina mpanjaka mpiady ianao; izany dia hanampy anao hampivelatra ny saina sy ny fandrindrana ny tanana. Saingy amin'ireo tombony rehetra ireo dia alao antoka fa tsy mampiditra ny tenanao be loatra amin'ny lalao ianao ka lasa mpidoroka. Ka inona no andrasanao? Mandehana ary sintomy ny finday PUBG amin'ny PC sy MAC anao.
Raha tianao ity lahatsoratra ity dia ampahafantaro ahy amin'ny alàlan'ny fandefasana ny hevitrao amin'ny PUBG Mobile, ary raha manana fanontaniana momba ny PUBG Mobile ianao dia alefaso ao amin'ny boaty fanamarihana.
Fahadisoana nw-2-5 netflix
ny fomba hijerena sarimihetsika farany an-tserasera maimaim-poana
mijery fizarana fahitalavitra vaovao maimaim-poana
Kaody kaody fanomezana maimaim-poana amin'ny Playstation
mampiasa chromecast amin'ny windows 10
ny tv dia mampiseho sarimihetsika amin'ny Internet maimaim-poana
Ahoana no fomba ahazoana mivantana taona xbox mivantana